Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Hotel Theresa: The Waldorf of Harlem
Hotel Theresa - Ny Waldorf an'i Harlem
Nisokatra ny Hotel Theresa tamin'ny 1913 tamin'ny làlana 125th sy ny Seventh Avenue ao Harlem ary nanidy ny varavarany ho hotely tamin'ny 1970.
Ny Hotel Theresa dia natsangan'ny mpivarotra entana teraka Alemanina Gustavus Sidenberg ary voatendry ho an'ny vadiny vao maty.
Ny hotely dia nanana mpanjifa sy mpiasa fotsy fotsy rehetra nandritra ny 28 taona voalohany.
Tamin'ny 1940, taratry ny fiovan'ny isan'ny mponina ao Harlem, ny hotely dia nalain'ny mpandraharaha amerikana afrikanina iray izay nanaiky ny firazanana rehetra ary nanakarama mpiasa sy mpitantana mainty.
Tamin'ny 18 septambra 1960, efa-bolana talohan'ny nanapahan'i Etazonia ny fifandraisana ara-diplomatika tamin'i Kiobà, dia tonga tao New York City i Fidel Castro nandritra ny fivoriana faha-15 an'ny fivorian'ny fivoriamben'ny firenena mikambana. Izy sy ny mpiasa tao aminy dia niditra tao amin'ny trano fandraisam-bahiny voalohany tao amin'ny Hotel Lexington Avenue sy ny làlambe faha-37. Rehefa nitaky $ 10,000 ny Shelburne noho ny fahasimbana voalaza fa nahitana akoho nahandro tao an-efitranony, dia nifindra tany amin'ny Hotel Theresa any Harlem ny mpiara-dia amin'i Castro. Ny vondrona Castro dia nanofa efitrano valo-polo tamin'ny $ 800 isan'andro. Ny Theresa no mpahazo tombontsoa tamin'ny fanaovana dokambarotra manerantany rehefa nitsidika an'i Castro tao i Nikita Khrushchev, praiminisitra ny Firaisana Sovietika, ny Jeneraly Abdul Nasser, filohan'i Egypt, Jawaharlal Nehru, praiminisitra India ary Malcom X.
Tao anatin'ny lahateny lava indrindra natao tany amin'ny Firenena Mikambana, Castro dia nifindra tamim-pitokisana tamin'ny zavatra niainany tao amin'ny hotely ho amin'ny fanavakavahana natrehin'ny Black American Blacks ho amin'ny ratsy lehibe kokoa an'ny "renivohitra ara-bola imperialista" sy ny "zioga fanjanahantany".
Tamin'ny faran'ny taona 1960, ny mpilatsaka hofidina ho filoham-pirenena John F. Kennedy dia nanao fampiatoana tao amin'ny Hotel Theresa niaraka tamin'i Jacqueline Kennedy, ny kongresista Adam Clayton Powell Jr., ny loholona Herbert Lehman, ny governora Averill Harriman, ny ben'ny tanàna Robert Wagner ary Eleanor Roosevelt. "Faly aho tonga mitsidika," hoy i Kennedy. “Ao ambadiky ny zava-misy i Castro tonga eto amin'ity trano fandraisam-bahiny ity, Khrushchev tonga hitsidika an'i Castro, misy mpitsangatsangana iray hafa lehibe eran'izao tontolo izao, ary izany dia ny fitsangatsanganana revolisiona manerantany, tontolo iray mikorontana. Faly aho fa tonga tany Harlem ary mieritreritra aho fa tokony ho tonga eto izao tontolo izao ary hanaiky izao tontolo izao fa mifanakaiky daholo isika rehetra, na eto Harlem na amin'ny lafiny hafa amin'ny tany. ”